Nkọwapụta numberdị nọmba CP-SF010 Imecha Polish / nchacha Nha Ọkpụ ma ọ bụ mgbidi rụnyere Ihe Metal ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara Ọdịdị elekere ahaziri nke eke Style design. A na-eme atụmatụ site n'ike mmụọ nke ogige mmiri. A na-egosipụta okooko osisi ma ọ bụ ọdịdị dị na usoro a na-adịghị ahụ anya site na nkesa na-ekesa nke usoro iheomume dị mfe. Typesdị dị iche iche nwere ụdị dị iche iche, dị ka ifuru, kpakpando, balloons, obi, akwukwo, akara ukwu, wdg, nwere ike ...
steepụ igwe ndobe nke igwe anaghị agba nchara
Nkọwapụta numberdị nọmba CP-SR002 Emecha Kachasị / nchacha Nzuzo ma ọ bụ mgbidi etinyere Ihe Metal ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara Ọdịdị ahaziri mere Elu ike, mmetụta na-eguzogide, adịghị mfe nrụrụ. Ezigbo mmiri na-eguzogide mmiri na corrosion, enweghị nchara nchara na gburugburu ebe obibi, ike mgbochi oxidation siri ike, na-adịgide adịgide maka ngwa mpụga ogologo oge. Na-adịghị egbu egbu, enweghị mmetọ. The nzọụkwụ okporo ígwè nwere ọlaọcha luster elu na mara anya na leghaara fi ...
nchara ọrụ ọrụ nke laser ọnwụ
Nkọwapụta numberdị Nlereanya CP-2T-SF009 Emechara Emechaa / leghaara anya Ihe 304 igwe anaghị agba nchara, silicon Style Per cutomized design Nnukwu mgbidi nka maka ime ụlọ n'èzí ihe ndozi, ụlọ, ogige, ogige na onyinye ụlọ. Anyị na-emepụta nka nchara nke na-eweta ọ joyụ na obi ụtọ, ịma mma na ndụ gị. Zuru oke maka ịchọ mma ụlọ, ọfịs ọrụ, ime ụlọ Ime ụlọ. Unique style metal tin ihe ịrịba ama: nke zuru okè udi nwere ike ịghọ ihe pụrụ iche na-elekwasị anya nke ọ bụla ohere. Ọ bụla mgbidi mma ga-eweta iche ...
dịgasị iche iche esichara ngwaahịa
Igwe anyị laser nwere ike ịmepụta ọtụtụ ọrụ panel works.There ọtụtụ ngwaahịa arụpụtara anyị nwere ike ịhazi. Dị ka uwe elu ọkọlọtọ, square anụ ahụ igbe na nke a nkecha mkpuchi; Na-ezobe igbe anụ ahụ katọn; Thedị dị ọcha, nke mara mma dị mma maka ụlọ ma ọ bụ nke azụmahịa; Na-eto ọ bụla mma.Generous ukwuu iji jide ọtụtụ ọkọlọtọ-sized square anụ ahụ igbe dị ka nke ọma dị ka stacks nke onye ihu nhicha ma ọ bụ tissues.Open ala-enye ohere maka mfe nnọchi nke efu anụ ahụ igbe R ...